Espana: Namely An’i Murcia Ny Horohorontany · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraAna Lucia Sa
Voadika ny 13 Mey 2011 11:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, 繁體中文, 简体中文, Nederlands, русский, Français, Italiano, Ελληνικά, বাংলা, srpski, polski, Español
Tratry ny horohorontany in-droa i Lorca, any amin'ny faritr'i Murcia, ao Espana, tamin'ny 11 May. Niteraka fahafatesan'olona sivy sy naharatràna manodidina ny 300 teo ho eo hatreto ireo horohorontany, nanana tanjaka 4.1 sy 5.1 [es] tamin'ny maridrefy Richter, miampy ireo rambony taty aoriana. An'arivony maro ireo tra-boina no tsy maintsy nifindra toerana, nitady fialofana.
Ireo tra-boina eny an-dalamben'i Lorca. Sary avy amin'ny EFE/Juan Francisco Moreno. Nalaina tao amin'ny Globovisión eo ambany fiarovana CC License.*
Sary EFE. Nalaina tao amin'ny Globovisión eo ambany fiarovana CC License.
Noho ny twitter dia tsapa avy hatrany ny fanehoam-piraisankina amin'i “Ciudad del Sol” (“Tananan'ny Masoandro”) , amin'ny tenifototra #terremotomurcia sy #todosconlorca nampiasaina mba hanelezana ny vaovao sy hanehoana firaisankina. Nanokatra kaonty ao amin'ny Facebook ireo mpanohana, Apoyo por el Terremoto de Murcia [es] (Fanohanana noho ny Horohorontany tao Murcia) izay efa naharaisana hafatra an'arivony sahady, ary ny bilaogy Murcian dia mizara ny hirifirin-dry zareo, toy ny ao amin'ny María en el Atelier [es]. .
Faharavàna tao Lorca, Murcia naterak'ilay horohorontany. Sary avy amin'ny EFE/Juan Francisco Moreno. Nalaina tao amin'ny Globovisión ambany fiarovan'ny CC License.*
Maro ireo tranobe ao Lorca no nisy fahavoazana amin'ny ampahany. Nalaina tao amin'ny Globovisión ambany fiarovan'ny CC License.*
Sary EFE. Nalaina tao amin'ny Globovisión ambany fiarovan'ny CC License.*
Misy fanisàna momba ny zavatra nitranga nandritra ilay horohorontany, antotanisa ary fenehoan-kevitra ofisialy anaty bilaogy toy ny Spain: The Blog, (Espana: Ilay Bilaogy) ary fangonana an'ireo vaovao manodidina ilay tranga, toy ny ao amin'ny Aquí hay tomate [es], izay manana pejy fandrakofana manokana. I Raúl Guevara [es], mpanao fanatanjahantena, dia milaza amintsika ny nizakany ny faharavan'izay niainany hatrizay sy hitany teo an-tanànany. Sady tsy adinony ny fanentanana ho amin'ny fifidianana manaraka eo an-toerana [es]:
Raha miady izy samy izy ireo antoko politika ny amin'izay fomba hitantànana ny firenena mba handresena amin'ny fifidianana, nomen'ny tany kosa ny dona mampisaina. Ny natiora tsy mahalala izay politika any, na tompondaka na ny resy.
Niharan'ny horohorontany iray i Lorca, Murcia. Sary avy amin'ny EFE/Israel Sánchez. Nalaina tao amin'ny Globovisión ambany fiarovan'ny CC License.*
Ary tsy ity no hany tranga nampifandray ny fiainana ara-politikan'ny Espaniola sy ny loza voajanahary tao Lorca. Ny bilaogin'i Antonio Javier Vicente Gil [es] dia mampiseho fiaraha-mientana tsy ankanavaka sy fandinihana lalina momba ny politikan'ny governemanta ao Espana amin'izao fotoana.
Ny iriko fotsiny dia ny hoe ity firenena ity izay naneho ny firaisankinany, afaka nandefa Euros an-tapitrisany ho an'ny loza tany ivelany, dia mba hirotsaka amin'ny fiavotan-tenany sy ny fanarenana, sady ny tiako ho lazaina dia hoe ny governemanta izay tsy mahavita mitantana antsika, aleo jerentsika hoe hatraiza no tena hiafaràn'i ZP [Zapatero], tena mendrika hojerena ny amin'io.
Misy fanakianana ihany koa ny amin'ny tsy fahampian'ny firotsahana avy hatrany ho fanampiana ireo izay tsy manana trano honenana nandritra ny alina voalohany, mifanohitra amin'ny tatitra nataon'ny fampahalalam-baovao ofisialy. Tahaka izay soratan'i Kaos en la Red [es]:
Mihetsika ny tany. Mirodana ireo trano tsotra sy efa antitra. Ary ireo tena faran'izay mahantra dia namoy ny kely nananany. Ireo tena osa, ireo mpiasa, maro amin'ireo mpifindra monina, ireo be antitra, ny tanora anaty fari-piainana tsy zarizary no tavela teny an'arabe.
*Ny sary rehetra dia nalaina avy amin'ny Kaonty Flickr an'ny Globovisión ary naverina navoaka teo ambanin'ny CC License BY-NC-2.0 License.